Golaha ammaanka oo ka baaran dagaya warbixin laga soo saaray xaaladaha Eritrea iyo Soomaaliya - BBC News Somali
Golaha ammaanka oo ka baaran dagaya warbixin laga soo saaray xaaladaha Eritrea iyo Soomaaliya
Waxyaabaha ay guddiga (SEMG) la socdaan waxaa kamid ah xakamaynta dhoofinta dhuxusha dalka Soomaaliya
Guddiga Qaramada Midoobay ee la socodka xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa yeeshay wada xaajood aan rasmi ahayn oo ay ku eegayaan warbixinadii ugu dambeeyay ay guddiga soo saareen.
Guddigan dusha kala socdo xaaladaha Eritrea iyo Soomaaliya ee (SEMG) ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya inay kala shaqayso xiririika kala dhexeeyo guddiga si loo dardargeliyo dadaallada nabadda, xakamaynta dhoofinta dhuxusha iyo hubka.
Gobolkee ka timid dhuxushii laga dhoofiyey Soomaaliya?
Maxaa laga filan karaa shirweynaha dhuxusha ee Muqdisho ka furmay?
Amakaag: Maroodi afka qiiq ka sii daynaya!
Guddiga Qaramada Midoobay ee xaaladaha Soomaaliya waxay soo dhaweeyeen horumarada siyaasadeed ee laga gaaray geeska Afrika oo uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Maxay tahay xarunta Niyukleerka Iran ee Natanz,iyo sirta shilalka ka dhaca?
"Hadalada xanafta leh ee ay ku larantahay hanjabaada, waxay dhiiragelin u yihiin ururada argagixisada"
Dhaqaalaha Clubhouse ma waxaa lagu qiimeeyay $4 bilyan oo doolar?